म विरुद्ध अश्लिल गालीगलौज गरेर डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गरे कस्ले जिम्मेवारी लिने? – दिपाश्री – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/म विरुद्ध अश्लिल गालीगलौज गरेर डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गरे कस्ले जिम्मेवारी लिने? – दिपाश्री
सन् २०१५ मा ‘क्लासिक’ फिल्मको सुटिङ सुरु हुने बेलातिर नम्रतालाई काम गर्न इच्छा नहुने, कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, भीडभाडमा पस्नै मन नलाग्ने हुन थाल्यो । क्लासिकको सुटिङ सुरु भएपछि उनलाई पहिलाको जस्तो अभिनय गर्न अप्ठ्यारो अनुभव भयो । मनमा विभिन्न कुरा खेलाउँथिन् । रातभरी उनलाई निद्रा पर्थेन । आत्महत्यासम्म गर्ने विचार पनि नआएको होइन । तर, उनले पछि अस्पतालमा गएर डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि खाइन् । त्यसपछि भने बिस्तारै उनले डिप्रेसनलाई जितिन्